Madaxweyne Xasan oo ka codsadey barlamaanka Somalia in Dr. Abdiwali Sheikh siiyaan codka kalsoonida – idalenews.com
Madaxweyne Xasan oo ka codsadey barlamaanka Somalia in Dr. Abdiwali Sheikh siiyaan codka kalsoonida
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka codsaday Baarlamaanka Soomaaliya inay codka kalsoonida siiyaan Ra’iisul Wasaaraha cusub C/wali Sheekh Axmed Maxamed.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad shalay ka dhacday madaxweynaha oo uu ku magacaabay Ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed, kaasoo bedelaya Ra’iisul Wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo 2-dii bishan waayay codka kalsoonida baarlamaanka.
“Iyadoo ay jiraan caqabdo fara badan haddana waxaan aad ugu kalsoonahay inuu Cabdiweli muddo gaaban ku sameyn doono isbedel dhanka dowlad wanaaga ah, waxaana ka codsanayaa Baarlamaanka inay kalsooni siiyaan iyadoo loo eegayo danaha shacabka iyo dalka Soomaaliyeed”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha cusub C/wali Sheekh Axmed uu ku kalsoon yahay inuu yahay mid ku haboon shaqadan, isla markaana ka qeyb qaadan kara dib u dhiska dalka iyo soo kabashada dhaqaalaha, isagoo tilmaamay in waayo aragnimo buuxa u leeyahay dhaqaalaha iyo horumarka, oo uu hey’ado caalami ah soo hogaamiyay.
Ra’iisul Wasaare C/wali Sheekh Axmed Waa dhaqaale-yaqaan jagooyin sar-sare ka soo qabtay muddo 20 sano ka badan hay’adaha Bangiga waddanka Canada, Bangiga adduunka, USAID, Midowga Afrika, COMESA, Midowga Yurub, Bangiga horumarinta Islaamka iyo qaar kaloo badan.
Waxaa uu muddo sannado ah la shaqeynayay hay’ado ka tirsan Qaramada Midoobay, guddiga dhaqaalaha ee Afrika, urur-goboleedka Galbeedka Afrika ee ECOWAS, ururka iskaashiga Islaamka, ururka jaamacadda Carabta ee horumarinta beeraha, urur-goboleedka IGAD, urur-goboleedka golaha iskaashiga khaliijka, sanduuqa Sacuudiga, sanduuqa Kuwait, Qadar, bangiga horumarinta Asia, bangiga horumarinta Afrika iyo qaar kaloo badan.
C/wali Sheekh Axmed waxaa uu ku dhashay magaalada Baardheere sanadkii 1959kii, waxaa uu haystaa labo dhalasho: Somali iyo Canadian.
Dhageyso: R/wasaaraha Cusub Oo Ka Hadlay Magacaabistiisa Iyo Qorshayaashiisa Siyaasadeed
Xildhibaan Shariif Xasan oo iskaga huleelay xarunta shirka KG ee Baydhabo ka dib diidmo lagala hor yimid qorshihiisa 3da gobol